Usayizi 12.2 MB
Play 7 921
Umbhali: UJean-Pierre Langer
I Marine Corps A-4 Skyhawk attack izindiza zinama ukukhanya injini bese elula.
Ukuthunywa i isigaba A-4 iwukuba ziyohlasela futhi zibhubhise amatshe, ukuze zikhiphe ezinophephela emhlane kanye ukuqhuba eminye imisebenzi Tactical.
Developed in the 50s zakuqala, A-4 Skyhawk ekuqaleni eyabekwa A-4D njengenhlangano
zenuzi isiteleka izindiza, usuku kuphela, futhi ezinze inqwaba abathwali izindiza.
Kukhona onobuhle eziningi A-4 enkonzweni.
A-4M kanye TA-4F njengamanje olusetshenziswa squadrons of Marine Corps Reserve.
Zonke onobuhle babe 20mm izibhamu ezimbili futhi uyakwazi ukukhulula ezivamile futhi enuzi ukulwa imini nobusuku.
A-4M isebenzisa amakhanda-up ukubonisa (screen endaweni visor umshayeli).
I Marine Corps Reserve yakhiwa ezimbili squadrons ka-4s ne 12 izindiza ngamunye.
Ngaphezu kwalokho, squad ngayine inezidingo ezimbili TA-4
Colors: Argentine Air Force (grey)
Ezivamile 2-D panel. No abanikeze asebenza nabo virtual (VC)
ngesivinini esiphezulu: 440 KIAS
Njengoba le ndiza kunzima kakhulu ukulawula, ulungise reckoning ngombala kusukwe. Qapha Izinhloso kokwehla! It is ewa kanzima! Umehluko omncane futhi ucosha iphiko! Uma othile uyaphuma ngaphandle umonakalo he is a ace ezindizayo. Ezinconyiwe kokwehla speed: 100 KIAS nge enezinto oluvundlile ngezansana ngokugcwele.
Nomakhi: Mcdonnell Douglas